‘Sidayisa izingubo zekhethelo’ | News24
LAST UPDATED: 2018-03-21, 08:04
‘Sidayisa izingubo zekhethelo’
ISITOLO esidayisa izingubo zekhethelo esaziwa ngokuthi, yi-CG Classic Collection, esasugulwa nguNkk Carol Gama odume kakhulu nomyeni wakhe onguMfundisi P.S Gama wase-New Christian Fellowship.
Lesi sitolo sisetshenziswa ngisho osaziwayo kubal, ‘umaKhumalo’ onguNkosikazi kaMengameli wakuleli nabanye.
Osebenza kulesi sitolo UNkk Zoliswa Sikhosana uthe: “Ayikho into emnandi njengoku sebenzela abantu abafana noNkk Gama nomyeni wakhe, ngoba bangabantu abamaziyo uNkulunkulu futhi abanosizo emphakathini.
Okuhle ngezingubo esizidayisayo wukuthi azitholakali kwezinye izindayo ngoba ezinye zazo zithengwa phesheya kwezilwandle, kanti ezinye zithungwa nguNomcebo Nsele wakwa-Too Hot Designers,” kusho yena.
Uma uthanda ukwazi kabanti nge-GC Classic Collections shayela inombolo ethi: 031 765 4901 noma uvakashele e-Shop 5C, Hillcrest Centre, 38 Old Main Road